भीआईपी जुवाडे प्रकरण : प्रहरीबाट जोगिन शौचालयमा लुकेका थिए बिटुमिन व्यापारी अग्रवाल ! | Ratopati
भीआईपी जुवाडे प्रकरण : प्रहरीबाट जोगिन शौचालयमा लुकेका थिए बिटुमिन व्यापारी अग्रवाल !
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक ११, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ– भीआईपी जुवाडे प्रकरणले चिनिएको काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित साम्बला होटल पछाडिको एक निजी घरमा जुवा खालमा प्रहरीको छापा प्रकरणमा नयाँनयाँ समाचारहरु बाहिर आउने क्रम जारी छ ।
उक्त जुवा अखडामा प्रहरी छापा मार्न पुग्दा जुवाडेहरुको भागाभाग मच्चिएको थियो ।
‘कोही शौचालय त कोही पलङमुनि समेत लुकेका थिए । त्यहाँ अप्रेशन गर्दा प्रहरीले ठूलै चुनौति भोग्नुपर्यो’ अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी भन्छन्, ‘प्रहरी आएको थाहा पाएपछि बिटुमिन व्यापारी पवन अग्रवालचाहिँ शौचालयभित्र लुकेको पाइयो । भित्रबाट चुकुल लगाएको पाएपछि प्रहरीले निकै सास्ती बेहोरेर नियन्त्रणमा लिनु परेको थियो ।’
अग्रवाल हुण्डी व्यपारी समेत भएको बुझिएको छ ।
भीआईपी जुवाडेका नामले चिनिने उक्त प्रकरणमा २५ जना जुवाडेसहित २ करोड ६७ लाख नगद समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो । सो घटनामा सहभागी भएकाहरु अधिकाँश व्यापारी रहेका थिए । भीआईपीहरु समातिएकाले उक्त मुद्दा कमजोर पार्न चलखेल सुरु भएको बताइएको छ ।